अत्याधिक मदिरा सेवनले स्वास्थ्यलाई कसरी ध्वस्त बनाउँछ ? - Everest Dainik - News from Nepal
एउटा ठट्यौली छ, ‘मदिरा पिउनु स्वास्थ्य र स्वास्नी दुबैको लागि हानिकारक छ ।’
हाम्रो समाजमा महिलाको तुलनामा पुरुषले बढी मदिरा पिउँछन् । कतिपय पुरुष के ठान्छन् भने, मदिरा पिउनु आफ्नो लैंगिक प्रवृत्ति हो । तर, महिला र पुरुषको शरीर संरचना उस्तो भिन्न हुन्न । मदिराले महिलालाई जति हानी गर्छ, उत्तिनै पुरुषलाई पनि । अक्सर के देखिन्छ भने, घरमा श्रीमती खानपिन तयार गर्ने र श्रीमान् चाहि मदिरा पिउन साथीभाई जमघट गर्ने ।
याे पनि पढ्नुस "मन्त्री, सांसद, कलाकार त पिउंछन भने मैले किन नखाने ?" रक्सीबारे नयाँ कुरा खुलासा गरे यी डाक्टरले